विचार/ब्लग Archives · sankhuwasavaonline
घुस्याहा प्रहरी र अपराधी समात्न काठमाडौंमा २ सय युवा परिचालन
काठमाडौंमा कार्यरत केही प्रहरीका कारण शान्ति सुरक्षामा प्रतिकूल असर परेको र अपराधीको मनोबल बढेको निश्कर्ष निकाल्दै काठमाडौं प्रहरीले घुस्याहा प्रहरी र फरार अपराधी पक्राउ गर्न काठमाडौंमा गोप्य रूपमा २ सय जना युवालाई परिचालन गर्ने भएको छ। अपराध नियन्त्रण गर्न र प्रहरीलाई सूचना उपलब्ध गराउने उद्देश्यले दुई सय युवासँग गोप्य सहमति हुन लागेको परिसरका एसएसपी विश्वराज पोखरेलले बताए।...
देश अघि बढाउन विज्ञका आठ सुझाव
काठमाडौं : शासन व्यवस्थाको दृष्टिले देशले छलाङ मारे पनि देशले लिनुपर्ने खास गति लिन सकेको छैन । कुनै पनि देशले गति लिनुको अर्थ त्यहाँ आर्थिक विकास, शान्ति, समृद्धि, स्थिरता, स्वास्थ्य र शिक्षामा सवलता वा उन्नति छाएको हुन्छ । यी सबै दृष्टिले नेपाल दीनहीन अवस्थामा छ । यस्तो दूरावस्थाबाट मुलुकलाई अघि हिँडाउनु आजको आवश्यकता हो । कसरी अघि बढ्न सक्छ त देश ? यो गम्भीर प्रश्नलाई यसरी स...
हामीले जेलाई प्रेम भन्दै आएका छौं, त्यसमा प्रेम कम यौन र विवाहको स्वार्थ बढी जोडिएको हुन्छ ।
प्रेम कसरी व्यक्तिगत हुन्छ ? काठमाडौँ : भनिन्छ, संसारमा सबैभन्दा बढी लेखिएको विषय प्रेम हो । ती अनगिन्ती गीत, कविता, कथा, निबन्ध वा उपन्यासमा हरेक लेखकले प्रेमलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन्छन् । हामीले हेर्दै आएका नेपाली र हिन्दी फिल्मको पहिलो र मुख्य विषयवस्तु पनि प्रेम नै देखिन्छ । नेपाली भाषामा गाइने गीतको सानो अंश मात्रैमा प्रेमले प्रवेश नपाएको होला । नत्र ...
-डा. बाबुराम भट्टराई काठमाडौँ : माओवादी जनयुद्ध नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सम्भवत: सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगा हो । लखन थापा मगरको विद्रोहबाट सुरु भएको नेपाली समाजको लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रिया १९९७ साल, २००७ साल, २०४६/४७ सालका संघर्षहरू हुँदै २०५२–०६२ सालको माओवादी जनयुद्ध (र त्यसपछिको मधेस आन्दोलन) पश्चात् नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुगेको जिउँदो यथार्थ हो ।...
अपांग छोरालाई १७ वर्ष आफूसँगै हुर्काएर होस्टल पुर्‍याउँदा आमा के सोच्छिन्?
छोराको छटपटी ‘मेडम हजुर त अपांग बच्चाहरूको क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ। हाम्रो बाबुजस्तो बच्चाहरूलाई राम्रो केयर गरेर राख्ने कुनै होस्टेलको सुविधा भएको स्कुल छैन ? ’ बाबु अंकितको स्कुलको फी बुझाउन जाँदा प्रिन्सिपल मेडमसँग आफ्नो मनको बह पोखेँ। दिनदिनै उसको उमेर बढ्दै थियो। मानसिक रूपमा एक वर्षको बच्चाजस्तो भए पनि शारीरिक हिसाबले उसको उमेर १७ वर्ष भइसकेको थियो। घरव्यवहार दु...
‘संघीयता’ राष्ट्रलाई धुजाधुजा बनाउन विदेशीले ओछ्याइदिएको बारुदी सुरुङ हो
–युवराज गौतम भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अघि त्यहाँ पाँचसय पैंसठ्ठीवटा राज्य थिए । सुरुमा, ब्रिटिस साम्राज्यको सिकार भए उनीहरू । दरबारमै बसेर अत्यन्त महँगा आभूषण र बस्त्रले सिँगारिए पनि ती राजा–महाराजाको कुनै राजनीतिक अधिकार बाँकी रहेन । सन् १९४७ पछि हैदरावादका निजाम (राजा) विद्रोही भएर उभिए तर सन् १९४८ को सेप्टेम्बर १३ तारिखमा बलपूर्वक सो राज्यलाई पनि भारतमा गाभियो । संकटमा मा...
देशले खोजेको कांग्रेस
-गगन थापा काठमाडौँ : दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा मत माग्दा नेपाली कांग्रेसले ‘आफ्नो संविधान आफैं लेख्ने’ जनताको ७ दशक लामो सपनालाई पूरा गरेरै छाड्ने वाचा गरेको थियो । परस्पर विरोधी सिद्धान्त र रणनीति लिएर संविधानसभा छिरेका चर्का प्रतिस्पर्धी शक्तिबीच समन्वय गर्दै कांग्रेसले लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेर त्यो वाचा पूरा गरेको छ । हाम...
रविन्द्र ज्यु ! नेपालि कांग्रेसलाई साथ दिएर भ्रष्टाचारीको मुखमा किरा पर्छ त ?
प्रिय रविन्द्र मिश्र, तपाईंको आफ्नो प्रतिष्ठित जागिर छाडेर राजनीतिमा लाग्ने निर्णयको खुलेर स्वागत गर्नेमध्ये म पनि एक हुँ । नेपाली समाज नयाँ अवस्थामा प्रवेश गर्दैछ । समाज रणनीतिक सिफ्टको चरणमा आइपुग्दा राजनीति पनि प्रगतिशील र अपडेटेड हुनुपर्दछ भन्ने मेरो बुझाई हो । तपाईंहरुको राजनीतिमा आगमनले राजनीति फेर्न मद्दत पुग्छ भन्ने मेरो आशा थियो । पछिल्लो समय तपाईंका निर्णयहरुले के...
जन्म देखी मृत्‍यु सम्म छोरीको नाम थर उही हुन किन सक्दैन?
काठमाडौँ:फिल्ममार्फत र विभिन्न माध्यम बाट छोरीको निम्ति आवज उठाउदै आएकी नायिका रेखा थापा ‘छोरीका निम्ति स्वर्णिम नेपाल महाअभियान’ लिएर विभिन्न जिल्लामा गएर महिलामाथि हुँदै आएका बाल विवाह , विभेद, हिंसा विरुद्धका विषय एवं महिला सशक्तिकरणको विषयमा आवाज उठाउँदै आएकी उनि छोरीलाई हेर्ने नजर र व्यवहार परिवर्तन गर्न लागि परेकी छिन । हालै उनले एक स्टाटस लेख्दै एउटा पुरुष सन्तान ...
वृद्धभत्ता यस कारण गलत ?
-मिन बहादुर पण्डित अर्थ मंत्रालयको सल्लाह र सहमति बिना ६५ वर्ष पुगेक़ा नागरिक लाई बृद भत्ता दिंछू भन्नुको कुनै अर्थ छैन । यो त केबल आगामी सरकारलाई अफ्ठेरो बनाउने रणनीति मात्र हो । के राज्यले अतिरिक्त दाइत्व धान्ने क्षेमता राख्छ ? निर्णय गर्नु अगाडी बिज्ञको राय सल्लाह र पर्याप्त गृयकार्य गरियो ? दूरगामी महत्व राख़्ने निर्णय गर्ने अधिकार चुनाब हारेको सरकारलाई छ ? यत्रो मही...